Diamond iko wiil Nsuputa na Suppliers | China Diamond Cup wiil ụlọ ọrụ
5 inch Turbo Cup Wheel maka Angle grinder
Turbo Diamond Cup Wheel; Nleba anya diamond dị elu maka ogologo ndụ yana iwepụ ihe ike. Na-egosipụta nnukwu akụkụ egweri nke nwere ozu nchara na-ekpo ọkụ nke na-enye mmụba ogologo ndụ na ndụ wheel.
100mm Iron Base Turbo-egweri Wheel maka Concrete, Granite, Marble
Enwere ike iji wiil iko ndị a maka ọtụtụ ọrụ dị iche iche site na ịkpụzi na polishing nke ihe na-ebupụta na ala, na-egweri ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ma ọ bụ nhazi na mkpuchi mkpuchi. Isi nchara dị arọ na-enye ịdịte aka na-adịgide adịgide.
7 inch Long Lifesand Diamond Floor Grinding Cup Wheel
Brazed diamond egweri iko wheel bụ ihe kasị rụọ ọrụ nke ọma n'ihi na akọrọ ma ọ bụ udu mmiri na-eji ngwa ngwa egweri, siri ike debarring, ezigbo shaping n'elu, nsọtụ na akụkụ nke konkiri, marble, ihe wdg masonry ihe. Nhazi nha nha nke buru ibu ma buru ibu na-abawanye ogologo ndụ.
180mm nnukwu curved akụkụ ihe egweri egweri
7 '' diamond egweri iko wheel maka ike-egweri nke ihe, gluu na ìhè mkpuchi mwepụ. Kwesịrị ekwesị maka ngwa ebumnuche izugbe na kọmpụta na masonry, gụnyere: ihicha, larịị, egweri na mkpuchi mkpuchi. Akụkụ diamond ogologo na-enye ndụ ndụ ka mma.
7 inch T Ọdịdị Wheel-egweri Wheel maka ihe
7 inch T-Segment Cup Wheel RIDGID bụ nke sitere na Hi-Grade diamond ntụ ntụ nwere njikọ nke emebere maka ịrụ ọrụ kacha mma. Emebere ya na akụkụ turbo maka ịkụ ihe ike, ịha nha na mwepụ nke ihe. Maka ojiji na angle grinders.
180mm diamond iko wheel nwere akụkụ rhombus
N'ihi na egweri ihe, ike konkiri, mabul, engineered nkume, wdg Diamond iko egweri wiil e mere maka akọrọ egweri, larịị na shaping Ideal maka elu nkwadebe. Kwesịrị ekwesị maka ịkụ ihe, na ngwa ngwa ngwa ngwa na ndụ dị mma.
5 inch turbo egweri iko wheel maka ihe na nkume
A na-eji wheel iko Turbo diamond eme ihe maka egweri ụdị ala ihe siri ike. Iko wheel na-adaba na mmụọ ozi grinder na ala grinder. Site na arụmọrụ dị elu, igwe na-egweri diamond turbo agaghị emebi ma ọ bụ mebie steeti mgbe ọ na-egweri. Ogologo ndụ ogologo na arụmọrụ kwụsiri ike.
5 inch PCD iko Wheel maka Epoxy, gluu, mwepu agba
PCD diamond cup egweri wheel na-eji maka mwepụ nke dị iche iche mkpuchi dị ka epoxy, gluu, mastic, acrylic, residues nke adhesives na screed. Agaghị ebugo ma ọ bụ mebie mkpuchi ahụ dị ka wiil iko diamond.
150mm Hilti iko igwe na-egweri maka ala ihe
Na-emepụta ngwụcha elu dị larịị na-eji ezigbo ngwakọta diamond abrasive. Emepụtara ka ọ nọrọ ogologo oge - na-enyere gị aka imekwu nke ọma na otu wheel iko ahụ. Ịma jijiji dị ala - teknụzụ nguzozi isi dị elu na-enyere gị aka ijide n'aka na njikwa akụkụ. Turbo rim – emebere ka egweri ngwa ngwa.
Akụkụ akụ 125mm Diamond Concrete egweri iko wiil
A na-eji mgbanaka ọla edo dị elu mee ya nke akụkụ diamond na-egweri iko wheel maka ịrụ ọrụ egweri kacha elu yana ogologo ndụ dị elu. Anyị pụrụ iche formulaed egweri agba na-enye a max egweri arụmọrụ na a dị nnọọ ala na-eri na iko egweri wheel.
Ụdị iko iko diamond nke nwere akụkụ 3pcs buru ibu na-enye ohere dị iche iche maka ọsọ mgbe ị na-egweri ihe. E jiri ya tụnyere wiil iko ndị ọzọ nwere akụkụ ọkpụrụkpụ 5mm, akụkụ 10mm ndị a dị elu na-enye ndụ ndị ọzọ na-egweri.
Akụkụ Àkụkụ 7 inch diamond egweri iko Wheel Maka ihe egweri ihe
A na-eji Wheel Arrow Cup maka iwepụ ihe mkpuchi dị mkpa na nkwadebe elu. Nhazi nke akụkụ ahụ na-enye akụkụ nke ọ bụla na kọntaktị ebe dị elu ma na-enye onye ọrụ ahụ ohere ịchịkwa ya na obere ohere igwu ala n'ala.